Naing Khun Aung & Khin Marlar Tun - The SPACE Language Academy
Naing Khun Aung & Khin Marlar Tun
“အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးက အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မထိတွေ့တာ ကြာပြီဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အခြေခံကနေ ပြန်ပြီး refresh လုပ်ချင်ခဲ့တာနဲ့ The SPACE Language Academy မှာ တက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျောင်းလေးမှာ တက်ရတာ ဖော်ရွှေတဲ့ အတန်းဖော်တွေရယ်၊ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ တကယ်ကို အခြေခံကနေ သေသေချာချာသင်ပေးတဲ့ teacher တို့ကြောင့် အင်မတန်အဆင်ပြေပြီး ပျော်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ အခုတက်နေတဲ့ ၃ လ ကျော်ကာလမှာ သိသိသာသာတိုးတက်လာတာကတော့ listening skill နဲ့ speaking skill တွေဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို ပြောရတာ ကိုယ်ကိုယ့်ကို ပိုပြီး ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်။ ပြောရဲလာတယ်။ စနစ်ကျတဲ့ သင်ကြားနည်းစနစ်တွေကြောင့် The SPACE ပြောထားသလို ၂ နှစ်အတွင်း အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်မယ်ဆိုတာကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ကျောင်းရဲ့ ပံပိုးမှု facilities တွေကလည်း တကယ်စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းလို့ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။”
“Hello everyone. Both of us lost touch with English foralong time and we would like to start learning English from the very basic level. That’s why, we joined the SPACE Language Academy. We haveareally great time learning English here at the SPACE Language Academy because of friendly class mates and, patient and skillful teachers. What we have improved during three-month time is our speaking and listening skills. We become more confident in speaking. I do believe what the SPACE Language Academy promise us to help us become competent in English within two years. The service of the staff and the facilities of the school are really nice. I’d love to invite everyone to join the SPACE Language Academy.”